गुल्मीका कुन स्थानीय तहलाई कती बजेट? हेर्नुस् पुरा विवरण – Gulminews
Home/मुख्य हेडलाईन/गुल्मीका कुन स्थानीय तहलाई कती बजेट? हेर्नुस् पुरा विवरण
गुल्मीका कुन स्थानीय तहलाई कती बजेट? हेर्नुस् पुरा विवरण
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ जेष्ठ २०, सोमबार २०:४२ मा प्रकाशित
२० जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि गुल्मीका स्थानीय तहलाई समपुरक र विषेशबाहेक झन्डै ३ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । १२ स्थानिय तह रहेको गुल्मीमा जम्मा ३ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैँया छुट्टाईएको हो ।
दुई वटा नगरपालिकाले २३ करोड ४ लाख रुपैँया वित्तीय समानीकरण अनुदान र ४१ करोड २० लाख सशर्त अनुदान गरी जम्मा ६४ करोड २४ लाख रुपैँया पाउनेछन् । दुई वटा नगरपालिका मध्य मुसिकोट नगरपालिकाले धेरै बजेट पाएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले ११ करोड ४९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान र २१ करोड ८४ लाख रुपैँया सशर्त अनुदान गरी ३३ करोड ३३ लाख रुपैँया बजेट पाउनेछ । तर रेसुङ्गा नगरपालिकाले भने ११ करोड ५५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान र १९ करोड ३६ लाख रुपैँया सशर्त अनुदान गरी जम्मा ३० करोड ३१ लाख रुपैँया बजेट पाउनेछ । यि रकममा समपुरक अनुदान र बिशेष अनुदान भने समावेश गरिएको छैन ।
गुल्मीका गाउँपालिकाहरुलाई जम्मा २ अर्ब ५२ करोड ७५ लाख रुपैँया छुट्टाईएको छ । जिल्लाका १० गाउँपालिका मध्य धुर्कोट गाउँपालिकालाई सबै भन्दा बढी २७ करोड ९२ लाख रुपैँया बजेट परेको छ । त्यस्तै सबै भन्दा कम गुल्मी दरबार गाउँपालिकालाई परेको छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिकालाई जम्मा २१ करोड ७७ लाख रुपैँया परेको छ जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ९ करोड ०५ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १२ करोड ७२ लाख रुपैँया रहेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकालाई भने वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ९ करोड १३ लाख रुपैँया र सशर्त अनुदान तर्फ १८ करोड ७९ लाख रुपैँया रहेको छ ।
सत्यवतीलाई २७ करोड ०३ लाख रुपैँया, चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई २६ करोड ७५ लाख रुपैँया, रुरु गाउँपालिकालाई २६ करोड ५४ लाख रुपैँया र मालिका गाउँपालिकालाई २६ करोड १० लाख रुपैँया बजेट छुट्टाईएको छ ।
त्यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकामा २५ करोड ३६ लाख रुपैँया, मदाने गाउँपालिकामा २४ करोड ५४ लाख रुपैँया, कालिगण्डकी गाउँपालिकामा २३ करोड ८३ लाख रुपैँया र ईस्मा गाउँपालिकामा २२ करोड ९१ लाख रुपैँया बजेट परेको छ । यि सबै रकममा समपुरक अनुदान र बिशेष अनुदान भने समावेश गरिएको छैन ।
कुन स्थानीयले कति पाए ? हेर्नुस्